Pane Nzvimbo Yakawandisa ... | Martech Zone
Svondo, June 1, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kune nzvimbo yakawanda yezvisikwa zvaMwari zvese. Padyo padyo nepatatisi yakachekwa., yakatanga kuiswa na dullhunk.
My baba akanditumira izvi neemail uye zvaingova zvinosetsa kuti usagovane.
Ichi chiziviso che Saskatoon Restaurant, Greenville, South Carolina, uye inogona kutengwa seT-Shirt.
Ndiri kuedza zvakare Flickr's 'Blog iyi foto' chimiro. Chinhu chakanakisa chinotonhorera uko iwe kwaunogona kugadzira template yekumisikidza uye kutumira mufananidzo ne blog blog yakananga kune yako blog kubva kune yavo interface uchishandisa yako blog yekunze yekutumira ficha. Pandakatanga kuitumira, yakati 'yakatadza' uye kuti 'Edza Zvakare'. Izvo chaizvo yanga isina kukundikana, zvakadaro, saka chenjera kana ukazviona izvo!
Ndicho chinhu chimwe chete chandinoshandisa kutumira mamaki angu ezuva nezuva kubva kuDel.icio.us.
Jun 3, 2008 pa9: 50AM
Iko kunakisisa-kutora. Ndakaona zvakafanana kushambadza kwenzvimbo dzekudyira izvo zvinogara zvichindisekesa (mune imwe nzira ine mhosva hongu).